[सम्पादकीय] नङ्ग्याउनेले नङ्ग्याइ सके अब हत्केलाले लाज छोपिन्न ! – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
[सम्पादकीय] नङ्ग्याउनेले नङ्ग्याइ सके अब हत्केलाले लाज छोपिन्न !
मुख्य समाचार विषेश समाचार सम्पादकीय
केही दिनदेखि बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पास भएको विषयले निक्कै चर्चा पाइरहेको छ । जग्गा कीर्तिे गरी व्यक्तिको नाममा गर्नेमा भूमाफियादेखि देशका बढेबढे नेताज्यूहरुको पनि नाम परेको छ । जसमध्येका अहिलेका चर्चित पात्र हुन् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल ।
पौडेलले बालुवाटारभित्रको ८ आना सरकारी जग्गा २०६१ साल पुस २९ गते किनेको देखिन्छ । जसलाई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमार्फत पास गराएका छन् छोरा नवीन पौडेलको नाममा ।
भूमाफियासँग मिलेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्नेमध्येका एक एक प्रमुख व्यक्तिको रुपमा पौडेलेको नाम आइसकेपछि पटकपटक विज्ञप्ति जारी गर्दै चोखिने प्रयास पनि गरेका छन् । सरकारले थालेको छानविनमा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने, आफ्नो नाम कसैले बदनाम गर्न नसक्ने स्पष्ट पनि पारेका छन् । उनले शुक्रबार मात्रै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४, बालुवाटारस्थित उक्त ८ आना जग्गाको दर्ता श्रेस्ता सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा बिक्री गर्ने व्यक्ति उमा ढकाल र माधवी सुवेदीको नामा कायम रहेको र प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित कार्यालयले खरिद बिक्री गर्न मिल्ने एकिन गरी लिखत पारित गरी लाग्ने राजश्व लिई छोरा नवीन पौडेलको नाममा पास गरिदिएको तथ्य पुनः स्मरण गराउँदछु ।’ उनले सो जग्गा नवलपरासीको वर्दघाट नगरपालिका वडा नं. १० (साविक तिलकपुर गाविस–३) पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नजिकैको श्रीमतीको नाममा रहेको ८ कठ्ठा जग्गा बिक्री गरी प्राप्त स्रोतबाट खरिद गरेको बताएका छन् । उनले आफूले जग्गा खरिद गर्दा मन्त्री, सांसद वा कुनै पनि तहको जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा नरहेको पनि बताएका छन् । साथै उनले त्यसपछि आफू सार्वजनिक पदमा बस्दा सो जग्गा सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गर्दै आएको पनि स्वीकार गरेका छन् ।
बालुवाटारको जग्गा पौडेलले किनेकै हुन्, उनको सम्पत्ति विवरणमा त्यो छ यो कुरा त उनले नै स्वीकारिसकेका छन् । तर बालुवाटारको सरकारी जग्गा जानाजान कसरी उनका नाममा आयो ?, २०६१ सालमा पनि बालुवाटारको जग्गा ५० हजार आना खरिद गर्न कसरी सफल भए ? आदि सामान्य विषयका उनको वक्तव्य बोल्दैन ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको जग्गा व्यत्तिका नाममा दर्ता भइसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि आएका समाचार, खण्डन र टिप्पणी अध्ययन गर्दा यो विषय यतिमै सीमित छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । बालुवाटारको जग्गा बेच्न भूमाफियाले तत्कालिन नेकपा एमाले पार्टीलाई चन्दा दिएको, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेको बेला भूमाफिया र मालपोतका हाकिमलाई उन्मुक्ति दिन ऐनमै संशोधन गराएको र जसकालागि लबिङ गरेबापत सो जग्गा विष्णु पौडेललाई उपहार आएको जग्गा दर्तामा उल्लेखित जग्गाको मूल्यले नै स्पष्ट पार्दछ । त्यसैले पौडेल चोखो छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
विष्णु पौडेल नेकपा एमालेकै प्रभावशाली नेता थिए । अहिले नेकपा बनेपछिका पनि उनी प्रभावशाली नेता नै हुन् । पार्टी एकीकरण र त्यसपछिका क्रियाकलापमा पौडेलेको भूमिका उल्लेखनीय छ । तर उनको विचारमा बेला बेला आउने गरेको परिवर्तन अहिले पौडेल नाङ्गिनुको प्रमुख कारण मान्नेहरु पनि छन् । स्रोतको दाबीलाई मान्ने हो भने उनलाई राजनीतिक रुपमा सिध्याउने खेल भइरहेको छ । गल्ती त पौडेलले गरेकै हुन् तर त्यही गल्तीमा टेकेर पौडेललाई नङ्ग्याउन जसले चाह्यो त्यो सफल भएको छ ।
पार्टीलाई भूमाफियाले चन्दा दिएको प्रमाण नहुन सक्छ तर जग्गा पास गरेको प्रमाण भएकोले पौडेल फस्दै गएको स्रोत बताउँछ । ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै पार्टीभित्रकै व्यक्तिले पौडेललाई नङ्ग्याएको स्रोतको दाबी छ । पार्टीलाई चन्दा दिएको विषय गौण हुनु, बालुवाटारको जग्गा हडप्ने अन्यको नाम धिमा हुनु, पार्टीभित्रको वैचारिक धरातलमा पौडेल कहिले एउटा खेमा तथा कहिले अर्को खेमामा पुग्नु जस्ता कुराले स्रोतको दाबीलाई पुष्टि गर्छ ।
पौडेलले यो कुरा कति बुझेका छन् त्यो त भन्न सकिन्न तर जसले उनलाई यो अवस्थामा पुर्याउँदैछ त्यो बाहिरको मान्छे वा मिडिया होइन बुझ्नु पर्दछ । नेपालका उच्च पदस्थ नेताहरु प्रायः कोही पनि दूधले नुहाएका छैनन् । तर विपक्षी वा प्रतिस्पर्धीले उसका कमी कमजोरी टिपोट गरेर राखिरहेको हुन्छ । अनि आवश्यकताअनुसार त्यसलाई प्रयोग गर्दछ । विष्णु पौडेल अहिले त्यही अवस्थामा छन् ।
पौडेललाई जसले चाह्यो त्यसले नराम्रोसँग नङ्ग्याइसकेको छ । अर्थात् उसले आफ्नो अभिष्ट पुरा गरिसकेको छ । जग्गा प्रकरणको असलियत जनताले पनि थाहा पाइसकेका छन् । नङ्ग्याउनेले नङ्ग्याइसकेपछि अब हत्केलाले लाज छोपिन्न त्यसैले आफ्नो गल्ती र वास्तविकता जनतासामू स्वीकारेर जिम्मेवारीबाट बाहिरिनु पौडेलको भलाईमा छ । सरकारी जग्गा छानविनमा उनले सहयोग गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । त्यसो गर्ने हो भने जनताको नजरमा पौडेल महान ठहरिने छन् । होइन र अझै ढाकछोप गर्ने हो भने हात पनि माथि उठाउने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
प्रकाशित मिति: 2019-04-20 2019-04-20 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged बालुवाटार व्यक्तिको नाममा विष्णु पौडेल सम्पादकीय सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता
विकास र सम्वृद्धि सुरु भइसक्यो, अब अलमलिने ठाउँ छैन — मुख्यमन्त्री राई
ज्योतिषीका भ्रमको पछि नलाग्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह
Tags: बालुवाटार व्यक्तिको नाममा, विष्णु पौडेल, सम्पादकीय, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता